1. iTunes-dị ka ngwá ọrụ iji Android
Ọ bụrụ na ị na-eji ihe Apple ngwaọrụ ị ga-abụ ihe iTunes ọrụ; iji ya ka mmekọrịta, hazie ma jikwaa gị faịlụ na iPod, iPhone ma ọ bụ iPad. Ma eleghị anya, ugbu a, Otú ọ dị, ị na tụgharịa ịbụ onye na-Android Fans, mgbe e nwere ihe ọ bụla dị otú ahụ ihe ngwa ka ị jikwaa ọdịnaya na gị Android.
N'ezie, ọ bụ ezie na e nweghị kpọmkwem iTunes atụmatụ na-atụmatụ oyiri maka Android, ị ka nwere ike ịhụ onye na-pụrụ ime ka ị na-iTunes-dị ka ahụmahụ na Android. Wondershare TunesGo (Mac) ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Win) arụ ọrụ dị ka iTunes maka Android igwe ma ọ bụ mbadamba. Ọ bụ ihe dị mfe na-eji software maka Mac na-enyere gị mmekọrịta iTunes music, listi ọkpụkpọ, pọdkastị, fim, TV na-egosi, iTunes U ka Android, na Anglịkan. Ke adianade do, ị nwekwara ike nyefee faịlụ site na Mac ka Android.
Key Akụkụ nke Wondershare TunesGo:
1. mmekọrịta iTunes ka Android
Mmekọrịta iTunes ka Android: mmekọrịta niile music, listi ọkpụkpọ, fim, iTunes U, pọdkastị, TV egosi ma ọ bụ họrọ media faịlụ site na iTunes ka Android igwe na mbadamba.
2. Nyefee Computer faịlụ ka Android, na Anglịkan
Nyefee faịlụ site na kọmputa na-Android
echekwa nza nke songs, fim, foto gị Mac? Ugbu a, i nwere ike iji TunesGo nyefee ha gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba, otú i nwere ike na-enwe ha mgbe ọ bụla ị na-aga.
Nzọụkwụ 1. Gaa na uppter nri akuku na pịa .Onye Android Finder window-abịa si.
Nzọụkwụ 2. Họrọ a faịlụ ụdị na ekpe sidebar, pịa Music, Photos, Movies ma ọ bụ Ndị Ọzọ (akwụkwọ). Mfe Dọrọ na dobe music, fim, foto na akwụkwọ faịlụ site na Mac gị Android ekwentị ma ọ bụ na tebụl.
Nyefee Android ka Mac / iTunes
The Mac version ọbụna-enye gị ohere nyefee music, fim, foto na dọkụmentị si gam akporo ka Mac. ị dị nnọọ na-eso nzọụkwụ. Họrọ faịlụ ụdị na ekpe sidebar na nne Mmetụta gị chọrọ faịlụ. Right pịa ma ọ bụ contrl pịa họọrọ faịlụ ma họrọ Export ka Mac ma ọ bụ Mbupụ na iTunes.
3. Hichaa iTunes Library
Gị iTunes na-messed elu na oyiri music, fim na ihe? ọtụtụ music mkpado na-efu efu? Echegbula. TunesGo maka Android enyere ọcha ahụ oyiri songs, na idozi efu music mkpado, cover na iTunes tacks.
4. Nkwado 2000 + Android Devices
Dakọtara na Android: Site Android 2.1 ka Android 4.4
Akwado gam akporo ngwaọrụ: Samsung, LG, Google, Motorola, HTC. Sony, ZTE, Huawei na ndị ọzọ.
> Resource> iTunes> iTunes maka gam akporo: Jikwaa gị Android ọdịnaya effortlessly